Garoowe: Golaha wakiiladda Puntland oo su,aalo waydiiyey Gudiga TPEC. | Sahan radio
Garoowe: Golaha wakiiladda Puntland oo su,aalo waydiiyey Gudiga TPEC.
Garoowe (SR): Baarlamaanka Puntland oo Maalinimadii shalay Fadhi aan Cadi ahayn Galay ayaa u yeeray Gudiga Kumeelgaar ah ee Doorashooyinka Puntland TPEC ,Waxaana ay waydiiyeen Su,aalo badan oo ku saabsan Hanaanka axsaabta badan,shuruucda iyo Xeerarka doorashooyinka Golayaasha deegaanadda Puntland ee ay xukuumada u gudbiyeen Gudiga TPEC.
Kulanka oo dood dheer ay ka galeen golaha wakiiladda Puntland ayaa waxaa mudanayaashu su,aalo ku waydiyeen ,waxaana su,aalahas ka jawaabayey Gudoomiyaha Gudiga Kumeelgaarka ah Maxamed Xasan Barre iyo xubnaha kale ee Gudiga TPEC.
Golaha wakiiladda Puntland ayaa kulankaan kaga arrinsandoona sidii ay dibu eegis ugu samayn lahayeen xeerka doorashooyinka Golayaasha deeganada Puntland ee lagu waday in dhawaan laga hirgeliyo deegaanadda loo qorsheyey ee gudigi sheegay in ay buuxiyeen shuruudaha degmada.